1 Esiane sɛ nnipa bebree abɔ mmɔden sɛ wɔbɛhyehyɛ nokwasɛm+ ahorow a yɛagye atom, 2 sɛnea yenya fii adansefo+ a wɔde wɔn ani hui ne wɔn a wɔsom asɛmpa+ no ho fi mfiase+ no hɔ nti, 3 me nso mabɔ me tirim saa, efisɛ mahwehwɛ nneɛma no nyinaa mu pɛpɛɛpɛ afi mfiase, sɛ mɛkyerɛw no nnidiso nnidiso+ abrɛ wo, onuonyamfo+ Teofilo,+ 4 na ama woahu nsɛm a wɔde akyerɛkyerɛ wo no mu nokware.+ 5 Yudea hene Herode nna no mu no,+ na ɔsɔfo bi wɔ hɔ a wɔfrɛ no Sakaria a ofi Abia+ asɔfokuw no mu, na ne yere yɛ Aaron+ mmabea no mu biako a ne din de Elisabet. 6 Ná wɔn baanu nyinaa teɛ+ wɔ Onyankopɔn anim efisɛ wɔnantew Yehowa mmara+ ne n’atemmude+ nyinaa mu pɛpɛɛpɛ a asɛm biara nni ho.+ 7 Nanso na wonni ba, efisɛ na Elisabet yɛ obonin,+ na wɔn baanu nyinaa mfe akɔ anim. 8 Bere a eduu ne kuw+ so a ɔreyɛ n’asɔfodwuma wɔ Onyankopɔn anim, 9 sɛnea asɔfodwuma ho amanne te no, na adu no so sɛ ɔkɔ Yehowa kronkronbea+ hɔ kɔhyew aduhuam;+ 10 dɔn a na ɔrehyew aduhuam no mu no, na nnipadɔm no nyinaa wɔ adiwo rebɔ mpae.+ 11 Yehowa bɔfo yii ne ho adi kyerɛɛ no, begyinaa aduhuam afɔremuka no nifa.+ 12 Sakaria huu no no, ne ho yeraw no na ehu kaa no.+ 13 Nanso ɔbɔfo no see no sɛ: “Nsuro, Sakaria, efisɛ wɔatie w’adesrɛ,+ na wo yere Elisabet bɛwo ɔbabarima ama wo, na ɛsɛ sɛ woto ne din Yohane.+ 14 W’ani begye na wo ho asan wo yiye, na nnipa pii bedi n’awo ho ahurusi;+ 15 efisɛ ɔbɛyɛ kɛse Yehowa anim.+ Nanso ɛnsɛ sɛ ɔnom bobesa ne nsãden biara,+ na honhom kronkron bɛyɛ no mã fi ne maame yafunu mu pɛɛ;+ 16 na ɔbɛdan Israel mma pii asan aba Yehowa+ wɔn Nyankopɔn nkyɛn. 17 Afei nso, ɔde Elia+ honhom ne ne tumi bedi n’anim, de adan agyanom koma+ aba mma so ne asoɔdenfo aba treneefo nyansa ho, asiesie nkurɔfo+ bi ama Yehowa.”+ 18 Ɛnna Sakaria bisaa ɔbɔfo no sɛ: “Dɛn na ɛbɛma matumi agye eyi adi? Efisɛ mabɔ akora+ na me yere nso mfe kɔ anim.” 19 Ɔbɔfo no buaa no sɛ: “Mene Gabriel,+ nea ogyina Onyankopɔn anim, na wasoma me sɛ me ne wo mmɛkasa+ na menka nneɛma yi ho asɛmpa nkyerɛ wo. 20 Hwɛ! wobɛtɔ mum,+ wuntumi nkasa de bɛkɔ akosi da a eyinom bɛba mu, efisɛ woannye me nsɛm a ɛbɛba mu wɔ bere a wɔahyɛ mu no anni.” 21 Saa bere no nyinaa na nkurɔfo no retwɛn Sakaria,+ na ɛyɛɛ wɔn nwonwa sɛ wakyɛ wɔ kronkronbea hɔ saa. 22 Nanso ɔbae no wantumi ne wɔn ankasa, na wohui sɛ wakohu n’ani so ade+ wɔ kronkronbea hɔ, na ɔyɛɛ nsɛnkyerɛnne kyerɛɛ wɔn, na wantumi ankasa. 23 Afei ɛbae sɛ nna a ɔde resom no baa awiei no,+ ofii hɔ kɔɔ ne fie. 24 Nna yi akyi no, ne yere Elisabet nyinsɛnee;+ na ɔde ne ho siei asram anum, na ɔkae sɛ: 25 “Eyi ne ɔkwan a Yehowa afa so ne me adi wɔ nna a wabɛhwɛ me sɛ obeyi m’ahohora wɔ nnipa anim afi hɔ no mu.”+ 26 N’asram asia so no Onyankopɔn somaa ɔbɔfo Gabriel+ kɔɔ Galilea kurow a wɔfrɛ no Nasaret mu, 27 ɔbaabun bi a wɔde no ama ɔbarima bi a wɔfrɛ no Yosef a ofi Dawid fie aware no nkyɛn; na ɔbaabun+ no din de Maria.+ 28 Ɔkɔɔ ne nkyɛn no, ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Asomdwoe nka wo,+ wo a wɔadom wo, Yehowa+ ka wo ho.”+ 29 Na asɛm no haw no yiye na odwinnwen ho sɛ: “Nkyia bɛn ni?” 30 Enti ɔbɔfo no ka kyerɛɛ no sɛ: “Nsuro Maria, na woanya Onyankopɔn anim dom;+ 31 na hwɛ! wobɛfa yafunu na woawo ɔbabarima,+ na ɛsɛ sɛ woto ne din Yesu.+ 32 Ɔbɛyɛ kɛse+ na wɔbɛfrɛ no Ɔsorosoroni no Ba;+ na Yehowa Nyankopɔn de n’agya Dawid+ ahengua+ bɛma no, 33 na obedi Yakob fie so hene afebɔɔ, na n’ahenni remma awiei.”+ 34 Maria ka kyerɛɛ ɔbɔfo no sɛ: “Ɛbɛyɛ dɛn na eyi ayɛ yiye bere a me ne ɔbarima nnae?”+ 35 Ɛnna ɔbɔfo no bua see no sɛ: “Honhom kronkron+ bɛba wo so, na Ɔsorosoroni no tumi bɛkata wo so. Ɛno nso nti na wɔbɛfrɛ nea wobɛwo no no kronkron,+ Onyankopɔn Ba.+ 36 Hwɛ! wo busuani Elisabet nso anyinsɛn ɔbabarima wɔ ne mmerewabere mu, na eyi ne nea wɔfrɛ no obonin no sram a ɛto so asia;+ 37 efisɛ Onyankopɔn fam de, asɛm biara nni hɔ a ɛrentumi mma mu.”+ 38 Ɛnna Maria kae sɛ: “Hwɛ! meyɛ Yehowa afenaa!+ Ɛnyɛ hɔ mma me sɛnea w’asɛm te.” Na ɔbɔfo no fii ne nkyɛn kɔe. 39 Enti Maria sɔree saa nna no mu de ahoɔhare kɔɔ Yuda kurow bi a ɛda bepɔw so mu, 40 na ɔkɔɔ Sakaria fie na okyiaa Elisabet. 41 Elisabet tee Maria nkyia no ara pɛ, akokoaa a ɔhyɛ ne yafunu mu no huruwii; na honhom kronkron hyɛɛ Elisabet mã, 42 na ɔde nne kɛse teɛɛm sɛ: “Wɔahyira wo mmea mu, na wɔahyira+ wo yafunu mu aba! 43 Ɛyɛɛ dɛn na me nsa aka hokwan sɛɛ, sɛ me Wura+ maame aba me nkyɛn yi? 44 Hwɛ! wo nkyia twaa m’asom ara pɛ na akokoaa a ɔhyɛ me yafunu mu no de anigye kɛse huruwii.+ 45 Anigye nso ne nea wagye adi, efisɛ nea efi Yehowa hɔ a waka akyerɛ no+ biara bɛyɛ hɔ.”+ 46 Maria kae sɛ: “Me kra kamfo Yehowa,+ 47 na m’Agyenkwa Nyankopɔn+ ho na me honhom di ahurusi;+ 48 efisɛ wahwɛ n’afenaa ohianiwa.+ Hwɛ! efi nnɛ, awo ntoatoaso nyinaa bebu me sɛ mewɔ anigye;+ 49 efisɛ Nea ɔwɔ tumi no ayɛ ade kɛse ama me, na kronkron ne ne din;+ 50 efi awo ntoatoaso so kosi awo ntoatoaso so no, ohu wɔn a wosuro no no mmɔbɔ.+ 51 Ɔde ne basa ayɛ ahoɔdenne,+ wabɔ wɔn a wodi ahantansɛm wɔ wɔn koma mu apansam.+ 52 Watu atumfoɔ+ afi nhengua so na wama mmɔborɔfo so;+ 53 wama nnepa amee wɔn a ɔkɔm de wɔn+ na wama wɔn a wɔwɔ ahode de nsapan kɔ.+ 54 Wabɛhwɛ n’akoa Israel,+ na wakae ne mmɔborɔhunu+ 55 daa sɛnea ɔka kyerɛɛ yɛn agyanom, Abraham ne n’aseni no.”+ 56 Na Maria tenaa ne nkyɛn bɛyɛ asram abiɛsa, na ɔsan kɔɔ ne fie. 57 Na Elisabet awo duu so, na ɔwoo ɔbabarima. 58 Na mpɔtam hɔfo ne n’abusuafo tee sɛ Yehowa mmɔborɔhunu+ adɔɔso no so no, wɔne no dii ahurusi.+ 59 Da a ɛto so awotwe no wɔbae sɛ wɔrebetwa abofra kumaa no twetia,+ na anka wɔde no reto ne papa Sakaria. 60 Nanso ne maame buae sɛ: “Dabi! mmom wɔbɛfrɛ no Yohane.” 61 Ɛnna wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Obiara nni w’abusua mu a ne din de saa.” 62 Enti wɔde nsɛnkyerɛnne bisaa ne papa sɛnea ɔpɛ sɛ wɔfrɛ no. 63 Ɛnna ogyee ɔbopon kyerɛw so sɛ: “Ne din de Yohane.”+ Na ɛyɛɛ wɔn nyinaa nwonwa. 64 Mpofirim ara n’ano buei+ na ne tɛkrɛma sanee na ofii ase kasae, hyiraa Onyankopɔn. 65 Ehu kaa wɔn a wɔte mpɔtam hɔ nyinaa; na wofii ase kaa eyinom nyinaa ho asɛm wɔ Yudea mmepɔw so nkurow nyinaa mu, 66 na wɔn a wɔtee nyinaa de siee wɔn koma mu,+ na wɔkae sɛ: “Dɛn koraa na abofra kumaa yi bɛyɛ?” Efisɛ na Yehowa nsa+ wɔ no so ampa. 67 Na honhom kronkron+ hyɛɛ ne papa Sakaria ma, na ɔhyɛɛ nkɔm+ sɛ: 68 “Nhyira nka Yehowa, Israel Nyankopɔn,+ sɛ wama n’ani aba ne nkurɔfo+ so na wagye+ wɔn. 69 Wama nkwagye abɛn+ so wɔ n’akoa Dawid fie ama yɛn, 70 sɛnea ɔnam n’adiyifo kronkron a wɔtenaa ase tete no ano so+ aka 71 sɛ obegye yɛn afi yɛn atamfo ne wɔn a wokyi yɛn nyinaa nsam no;+ 72 wahu yɛn agyanom mmɔbɔ de akae n’apam kronkron,+ 73 ntam a ɔkaa yɛn agya Abraham+ 74 sɛ onya gye yɛn fi atamfo nsam+ a, ɔbɛma yɛn hokwan de asom no a yɛrensuro+ 75 wɔ nokwaredi pintinn ne trenee mu n’anim, yɛn nkwa nna nyinaa no.+ 76 Na wo abofra kumaa yi, wɔbɛfrɛ wo Ɔsorosoroni no diyifo, efisɛ wubedi Yehowa anim akosiesie n’akwan,+ 77 na wama ne nkurɔfo anya nkwagye a ɛnam wɔn bɔne fafiri+ so ba no ho nimdeɛ, 78 yɛn Nyankopɔn mmɔborɔhunu nti. Saa mmɔborɔhunu yi nti adekyee+ hann fi soro bepue yɛn so,+ 79 ama wɔn a wɔtete sum ne owu sunsuma+ ase no anya hann, agye yɛn taataa akɔ asomdwoe kwan so.” 80 Na abofra kumaa no nyin+ yɛɛ den honhom mu, na ɔtenaa sare so kosii da a oyii ne ho adi kyerɛɛ Israel.